Misasaka ity ny taona… | NewsMada
Misasaka ity ny taona…
Par Taratra sur 31/05/2018
Voalohan’ny volana jona, rahampitso! Maro ny varimbariana, kanefa koa tsy vitsy ireo donton’ny fantsy vokatry ny ady amin’ny fiainana, ka miandry sarahina toa ny akoho resy an’ady fotsiny.
Misasaka sahady ity ny taona 2018. Taona handrandrain’ny maro ho taon’ny fanovana, satria tokony hamadika pejy iray eo amin’ny tantarany i Madagasikara. Tokony, satria tsy mbola fantatra na hisy marina na tsia ilay fifidianana amin’ity taona ity.
Raha mpanara-baovao tsotra fotsiny aloha dia tena fanina. Tsy hita izay horaisina: ny ambaran’ny andaniny sa ny famaritan’ny ankilany? Toa samy mandrirotra amin’izay maha mety azy ny mpitondra sy ny mpanohitra, ary mivoy izay mifanandrify aminy koa ny haino aman-jery.
Hiala (na esorina) ny praiminisitra, ho rava ny governemanta, hiaraha-mitantana izay solony, eo, sns. Samy manana ny paikadiny eo daholo. Samy manana ny fandikany ny lalàna, arakaraka izay mahamety ny fironany ihany koa io.
Ity kosa ilay fanontaniana ilain’ny rehetra valiny: oviana marina no hotontosaina ny fifidianana filoham-pirenena? Sao mantsy lasa mivaona amin’izay ny andaniny sy ny ankilany. Io no any mba niraisan’ny mpitondra sy ny mpanohitra hevitra, dia ny hisian’ny fifidianana hifaninanan’ireo mpifanandrina politika.
Ny fizotry ny hazakazaka rehetra, efa manondro mankany avokoa. Samy mitsapasapa hery eny. Samy miezaka mambabo ny fon’ny mpifidy dieny mialoha. Azo antoka fa efa samy vonona ara-bola sy ara-pitaovana ihany koa, indrindra ireo mpifaninana lazaina fa goavana.
Ho tontosa ato anatin’ity enim-bolana faharoan’ny taona 2018 ity ve? Sa hisy kajikajy hafa, hanemorana izany indray?